ALIEXPRESS အပေါ်ကတ်အရေအတွက်အားပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို - ALIEXPRESS - 2019
AliExpress တွင်ဝယ်ယူမှုများအတွက်ပေးဆပ်ရန်ဘဏ်ကတ်များအသုံးပြုခြင်းများအတွက်နှစ်ခုယန္တရားများအကောင်အထည်ဖော်။ ဤသည်ရွေးချယ်ရေးအသုံးပြုသူအမြန်နှုန်းနှင့်ငြိမ်ဝပ်ဝယ်ယူခြင်း, သို့မဟုတ်၎င်း၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဖြစ်စေရန် preference ကိုပေးစေခြင်းငှါခွင့်ပြုပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးလမ်း - က Alipay ငွေပေးချေမှုစနစ်အတွက်ပါပဲ။ ဒီဝန်ဆောင်မှုငွေသားနှင့်အတူအရောင်းအများအတွက်အထူးဖှံ့ဖွိုးတိုးတ AliBaba.com ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ဘဏ်ကဒ်အကောင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Access တစ်ခုတည်းအချိန်ယူထားသော။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အသစ်သောလုံခြုံရေးအစီအမံများထောက်ပံ့ပေး - ငွေပေးချေမှုများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသိသိသာသာတိုးပွားလာကြောင်းဒါကြောင့်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ယခုထုတ်လုပ်ရန်စတင်နှင့် Alipay ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုတက်ကြွစွာလီပေါ်ဝယ်သူသုံးစွဲသူများအဖြစ်ပမာဏများအတွက်အကောင်းဆုံးသင့်လျော်သည်။
ဒုတိယနည်းလမ်းမဆိုအွန်လိုင်း site ပေါ်တွင်ဘဏ်ကတ်များအားဖြင့်ငွေပေးချေ၏ mechanics ရဲ့ဆင်တူသည်။ အသုံးပြုသူငွေပေးချေမှုများအတွက်လိုအပ်သောငွေပမာဏရှိနုတ်ယူသောပြီးနောက်သင့်လျော်သောပုံစံအတွက်ငွေပေးချေမှုသင့်ရဲ့နည်းလမ်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရပါမည်။ ဒီ option ကခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောလုပ်သူကိုအသုံးပြုသူများသည်သို့မဟုတ်တဦးတည်းအချိန်ဝယ်ယူဘို့, ဒါမှမဟုတ်သေးငယ်တဲ့ပမာဏများအတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့အများဆုံးဦးစားပေးမည်, အများကြီးပိုမြန်လွယ်ကူသည်နှင့်သီးခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမလိုအပ်ပါဘူး။
option ကိုခရက်ဒစ်ကဒ်၏ဒေတာသိုလှောင်, ပြီးတော့သင်ပြုပြင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပင်ကိုဇောင်းမှဖြစ်စေ။ ဟုတ်ပါတယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြေပုံများအား အသုံးပြု. နှင့်မည်သို့ရုံနှစျခု, သင့်ငွေပေးချေမှုသတင်းအချက်အလက်ကိုပြောင်းလဲရန်၏နှစ်ခုမျိုးကွဲများ၏။ သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိပါတယ်။
Method ကို 1: Alipay
အကြွေးဝယ်ကတ်များအသုံးပြုသော Alipay စတိုးဆိုင်များဒေတာ၌တည်၏။ အသုံးပြုသူပိုင်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်, ပြီးတော့နေဆဲသင့်အကောင့်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့ဘူးဆိုပါကဒီမှာဒေတာ detect ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုသင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ပထမဦးဆုံးအသငျသညျ Alipay စနစ် log ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုသင်အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာသင်၏ပရိုဖိုင်ကျော်ပျံဝဲသည့်အခါပေါ်လာတဲ့ pop-up menu ကိုမှတဆင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ သင့်အနေနိမ့်ဆုံး option ကိုရွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် - "ကျနော့် Alipay".
မည်သို့ပင်အသုံးပြုသူရှေ့ logged ထားပြီးရှိမရှိ၏, သငျသညျလုံခွုံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထပ်ပရိုဖိုင်းကိုရိုက်ထည့်ပါသတိပေးခံရနေကြသည်။
main menu ကို, Alipay စာနယ်ဇင်းထိပ် toolbar ကိုပေါ်သေးငယ်တဲ့အစိမ်းရောင်စက်ဝိုင်းအိုင်ကွန်၌တည်၏။ သငျသညျသူ့ကိုအပေါ်တစ်ဦး Tooltip ပျံဝဲလိုက်တဲ့အခါ "Edit ကိုကဒ်".
အားလုံးလုံခြုံအကြွေးကဒ်တစ်ဦးကစာရင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကို ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များတည်းဖြတ်ရန်စွမ်းရည်လုံခြုံရေးကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ အသုံးပြုသူကိုသာသက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကို အသုံးပြု. မလိုအပ်သောမြေပုံများအားပယ်ဖျက်ပြီးလူသစ်တွေထည့်နိုင်သည်။
ငွေတောင်းခံလိပ်စာ (system ကိုအရွက်လူတစ်ဦးဖြစ်ကောင်းနေထိုင်ရာရာအရပ်ထက်ကဒ်ကိုအစားထိုးလိမ့်မည်ဟုအကောင့်သို့ယူပြီးပြီးခဲ့သည့်အချိန်ကဆိုပါတယ်);
အသုံးပြုသူတစ်ဦးငွေပေးချေမှုစနစ်မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းစဉ်၏သင်တန်းကိုမေးမြန်းထားတဲ့ Password ကို Alipay ။
ဤပစ္စည်းများကိုပြီးနောက်ပျောက်ရုံကလစ်ဖြစ်ပါသည် "ဒီကတ်ကို Save".
ယခုတွင်သင်သည်ငွေပေးချေမှု၏နည်းလမ်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာအမြဲငွေပေးချေမှုမရှိတော့ထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မည်သည့်ကဒ်၏ဒေတာကိုဖျက်ပစ်ရန်အကြံပြုသည်။ ဤသည်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်။
အသုံးပြုသူများအများ၏လျှို့ဝှက်ဒေတာဘယ်နေရာမှာမဆိုသွားနှင့်ကောင်းသောလက်၌မတည်မနေပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Alipay လွတ်လပ်စွာ, ငွေပေးချေမှုအပေါငျးတို့သစစ်ဆင်ရေးနှင့်တွက်ချက်မှုထုတ်လုပ်သည်။
Method ကို 2: ပေးဆောင်သည့်အခါ
သင်တို့သည်လည်းကတ်အရေအတွက်အားပြောင်းလဲနိုင်သည် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းဖြစ်စဉ်။ အမည်ရသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုစင်မြင့်၌တည်၏။ အဓိကနည်းလမ်းနှစ်သွယ်ရှိပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးလမ်း - ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါရန်ဖြစ်ပါသည် "တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကဒ်ကိုသုံးပါ" ဝယ်ယူ၏စင်မြင့်မှာ, အပိုဒ်3၌တည်၏။
ဒါဟာနောက်ထပ်ဂျဖွင့်လှစ် "တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကဒ်ကိုသုံးပါ"။ ထိုသို့ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။
မှတ်ပုံတင်ကတ်များများအတွက်စံခြင်းကိုပုံစံ။ အရေအတွက်, သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲနှင့်လုံခြုံရေးကုဒ်ပိုင်ရှင်၏အမည်နှင့်အမညျ - အစဉ်အလာဒေတာကိုထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။
Card ကိုသုံးနိုင်တယ်, ဒါကြောင့်လည်းအနာဂတ်၌ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။
ဒုတိယလမ်း - မှတ်ပုံတင် option ကို၏စင်မြင့်ပေါ်မှာရှိသမျှအတူတူပင်အပိုဒ်3ရွေးချယ်ဖို့ "အခြားပေးချေမှုနည်းစနစ်များ"။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ဆပ်ဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။
ဤနည်းလမ်းကိုနည်းနည်းပိုရှည်ကြောင်း မှလွဲ. ယခင်တဦးတည်းအနေဖြင့်မပါကွဲပြားခြားနားသည်။ သို့သော်ဤလွန်းရာကိုအောက်တွင်တစ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာအင်တာနက်ပေါ်ရှိဘဏ်ကဒ်အချက်အလက်များ၏နိဒါန်းနှင့်အတူမည်သည့်ခွဲစိတ်ကုသမှုနှင့်အတူကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်များအတွက်ကြိုတင်စစ်ဆေးသင့်ကွန်ပျူတာကိုရန်အရေးကြီးပါသည်, အောက်မေ့ရပါမည်။ အထူးထောက်လှမ်းရေးသတင်းအချက်အလက်များအားဖြင့်မိတ်ဆက်အသုံးပြု fraudsters ကလွှဲပြောင်းလွတ်ကျက်နိုင်ပါ။
အလွန်မကြာခဏအသုံးပြုသူများ Alipay အသုံးပြု. ဆိုက်ဒြပ်စင်၏မမှန်ကန်ကြောင်းစစ်ဆင်ရေး၏ပြဿနာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အသုံးအများဆုံးပြဿနာသောအခါ re-စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းအတွက်ငွေပေးချေမှုစနစ်၏မျက်နှာပြင်နှင့်, home page ကိုအတွင်းဘာသာပြန်ဆို Alipay အသုံးပြုသူများသည်အတွက် logging အခါ။ အကောင့်သို့ယူပြီးမဆိုအမှု၌, ပြန်လည်လက်ခံကျင့်သုံးဖို့ Alipay ၏ဝင်ပေါက်မှာ process ကို fixation ဖြစ်လာ, ဒေတာလိုအပ်သည်။
အတွင်းကြုံတွေ့အသုံးအများဆုံးပြဿနာ Mozilla Firefox သငျသညျလူမှုရေးကွန်ရက်များသို့မဟုတ် Google ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်ထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားသောအခါ။ ဤအခြေအနေ၌, ဒါကြောင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား browser ကိုသုံးပြီးကြိုးစားကြည့်, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ထဲသို့ဝင်တစ် password ဖြင့် log in လုပ်ဖို့အကြံပြုသည်။ သို့မဟုတ်, သင်ရုံပူးတွဲန်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ဝင်ပေါက်သုံးစွဲဖို့ဆန့်ကျင်ပေါ်, အကို manual input ကိုထွက်ထပ်ခါတလဲလဲလျှင်။
သင်ကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မြေပုံပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးစားသောအခါတစ်ခါတစ်ရံ, တူညီတဲ့ပြဿနာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ option ကိုကနေအကျိုးမပေးနိုင်နိုင်သလား "တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကဒ်ကိုသုံးပါ"ဒါမှမဟုတ်စနစ်တကျအလုပ်မဖြစ်ဘူး။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်မြေပုံပြောင်းလဲပစ်ရန်ရှည်လျားသောလမ်းနှင့်အတူဒုတိယမထိုက်မတန်ဂျ။
ထို့ကြောင့်သင်မှတ်မိဖို့လိုတယ် - ခရက်ဒစ်ကတ်များနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်အပြောင်းအလဲများကို AliExpress များတွင်အသုံးပြုရပါမည်, အနာဂတျမှာအဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေမိန့်ရသောအခါနိုင်အောင်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အသုံးပြုသူကအလွယ်တကူငွေပေးချေ၏နည်းလမ်းများ၏အပြောင်းအလဲကိုမေ့လျော့ခြင်းနှင့်အဟောင်းကဒ်၏ငွေပေးချေမှုလုပ်ရန်ကြိုးစားနိုင်ဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အချိန်မီဒေတာ updates များကို။